Qarax 5 ku dilay Muqdisho & dagaal socda - BBC Somali
Qarax 5 ku dilay Muqdisho & dagaal socda
Image caption Askar ka tirsan dowladda ku meelgaarka ah
Ilaa shan qof, ayaa ku dhintay qarax miino oo ka dhacay magaalada Muqdisho.
Sidoo kalena, waxaa dib u soo cusboonaaday dagaal u dhaxeeyay ciidamada dowladda iyo kooxda mucaaradka ee Al-Shabaab.
Dagaalka saaka, ayaa wararku sheegayaa in uu dib u bilowday kadib markii xoogaga al-Shabaab ay weerareen fariisimo ay joogeen ciidamada dowladda.
Dhinacyada ayaa u muuqda in dagaalkoodu yahay mid aan dhinac u dhaaqayn oo dagaalku in ka badan 3 maalmood uu hal goob ka socdo.
Qasaaraha dhabta ee dagaalka saaka ayaanan la ogayn, balse dhowrkii maalmood ee la soo dhaafay, waxaa ku dhintay in ka badan 50 qof.
Dadkan oo intooda badan rayid ah, ayaa dhintay kadib markii ay guryahooda, suuqyada iyo isbitaallo ay ugu tageen madaafiic ay dhinacyadu soo ridayeen, kuwaas oo intooda loo malaynayo in ay ka soo dhacayaa dhinaca dowladda ayna ridayaan ciidamada AMISOM.
Tirada ugu badan ee dadka rayidka ah ee ku dhinta dagaalada ayaa madaafiicdaas ay dishaa.
Afhayeen u hadlay AMISOM, ayaa shalay sheegay in 2 askari looga dilay dagaalka, 3 laga dhaawacay, taangina uu "dab ka qabsaday", taas ayuuse sheegay in aysan ka jeedin doonin howsha caalamiga ah oo uu sheegay ay ugu jiraan sidii nabad loogu soo celin lahaa Soomaaliya.
Labada dhinac ee dagaalku u dhaxeeyo guulo ayuu mid walbaa ka sheeganayaa dagaalka, inkastoo ay adag tahay in si rasmi ah loo xaqiijiyo, balse waxaa cad in is mari-waa dhinaca dhulka ah uu ka jiro goobaha dagaalka.